Nanazava ny zanakavavin'i Nicole Kidman sy Tom Cruise
Ny zanaka vavy natsangan'ny iray amin'ireo mpivady tsara indrindra ao Hollywood, ary ankehitriny ny mpivady, Nicole Kidman sy Tom Cruise, lavitry ny aloky ny reniny, dia lasa vehivavy raharaham-barotra. Ilay lehibe any Isabella dia nanapa-kevitra ny ho tonga mpamorona ary efa namela ny andalana fitafiana BKS, miaraka amin'ny fametrahana ny anarana hoe Bella Kindman Cruise. Ny hevitry ny mpamorona iray dia tena nalaza indrindra, - Isabella dia hivarotra T-shirt manokana miaraka amin'ny sora-baventy amin'ny endriny manokana ao amin'ny fivarotany amin'ny aterineto.
Ankizivavy iray no namorona ny ray aman-dreny tamin'ny fahazazany, hatramin'ny fahazazany dia naneho fahaizana zavakanto izy ary nanonofy ho lasa mpanakanto malaza. Saingy noho ny asan'ny mpanakanto dia tsy niasa ny zazavavy, ary tonga mpanakanto izy.
Faly i Isabella tamin'ny asany tao amin'ny toeram-pivarotan-jazakely, ankoatra izany, nahatsiaro maimaim-poana ny herin'ny voninahitry ny reniny sy ny reniny malaza izy. Ny ankizivavy, na ny manambady, aza nanasa ray na reny tokan-tena hanambady. Ary taorian'ny fampakaram-bady niaraka tamin'ny vadiny vaovao, Max Parker, Isabella dia nipetraka tao amin'ny faritra mangina iray any atsimon'i Londres. Nandritra ny taona maro dia niasa tao amin'ny salon beauty iray izy ary faly be.
Fiainana vaovao tsy misy fitarainana tranainy
Na dia izany aza, i Isabella ankehitriny dia nanome lolom-po ho an'ny faniriana ary nanapa-kevitra ny handray anjara amina asa an-tselika. Ary, na dia teo aza ny banga lava teo amin'ny fifandraisany tamin'ny reniny taorian'ny nisarahany tao Cruz, ilay tovovavy dia nanapa-kevitra ny hihavana amin'i Nicole.
Jennifer Lopez miaraka amin'ny sipany, reny ary rahavavy amin'ny lanonana Time 100 Gala
Tao anatin'ny kimono sy ny satroka: nandeha tamin'ny daty i Katie Holmes
Tsarovy fa ny iray amin'ireo antony lehibe mahatonga ny fanakorontanana ny fifandraisana eo amin'ny mpivady dia tsy fifanarahana amin'ny olana momba ny fitaizana zaza, indrindra indrindra ny toe-tsaina manoloana ny Scientology, ny finoana, izay ampiharin'i Tom Cruise. Ny mpivady kintana, ankoatra an'i Isabella, dia nanan-janaka lahy izay nanapa-kevitra ny hijanona miaraka amin'ny rainy taorian'ny nisarahan'ny ray aman-dreny. Kidman tenany dia nanambady an'i Keith Urban ary niteraka roa vavy vavy - Sandy sy Finoana.
Jensen Ackles sy ny vadiny dia miandry kambana
Raha i Kaya Gerber tao anaty bikini-mena mena teny amoron-dranomasin'i Miami dia nipoaka ny tambajotra iray tao amin'ny tambajotra
Taorian'ny nandaozany ny fianakavian'i Ewan McGregor, i Yves Mavrakis no nanamarika voalohany ny elanelany
Kim Kardashian dia nilaza fa ny Avaratra dia tsy tia an'i Seint rahalahiny
Jared Leto sy ny zanany vavy 2015
Divination "Inona no ao am-po?"
Firy no teraka farany?
Beige trano biletà - ny modely lamaody sy ny fomba fitafy?
Fanomezana ho an'ny lehilahy mandritra ny 30 taona
Nahoana ny alika no "mitondra ny Papa"?
Ahoana ny fomba fitarihana ny volo amin'ny lokony?
Fiatoana ao amin'ny trano fidiovana
Verguni - recipe
Pavilion avy amin'ny pallets
Ny lalitra dia manidina eny ambony lanitra - famantarana
Akanjo fitondra amin'ny akanjo fitaratra